यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या! |
यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या!
September 11, 2021 adminLeaveaComment on यिनै हुन् २६ वर्षीय भतिज लोकबहादुर कार्की जसले ‘हेपाई’ सहन नसक्दा गरे कहालीलाग्दो ह त्या!
भोलि बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म यी ठाउँमा लोडशेडिङ,हजुरको ठाउँमा त होइन?
दक्षिणामा नगद पाउनुभयो!अब यसो गर्नुस्,नत्र कारबाहीमा परिएला